Rubric: Mamwe photo-video
Maitiro ekuona Exif yeShowexif kutora kwemifananidzo Iyo izere nemapurogiramu ayo anogona kuziva kuti ungazviita sei izvi kana kuti zvakagadzirirwa izvo. Kunze kwekunge, zvechokwadi, iyo pikicha yakatorwa kubva paInternet, hakuzovi neanowanzo ...
Mufananidzo wemufi unofanirwa kudzika pakona ipi? Uye izvi zvinogona kupi kujekeswa? zvirokwazvo zasi kurudyi ... Iyo tepi inowanzo kusungirirwa kurudyi pazasi kana kumusoro korona (hama kwatiri). Kunyangwe ...
GP PowerBank Quick 3 chiratidzo chinopenya zvitsvuku kwemaminitsi maviri uye zvino chinopenya. Chii? Zvingangodaro kuti mabheti akave asingashandisi. Ndine zvimwe zvakayeuka. Iyo inoshanda zvakanaka.Chiratidzo chinopenya mu ...
Nei kombiyuta isingaoni kamera yemagetsi? Ndiudze. Ndakatumira iyo digital mune ye laptop kuburikidza nesbb, yakawanikwa, asi inonyora kuti faira haina chinhu. Zvichida kombiyuta haina kuona kamera, seku ...
Nzira yekutarisa mapepa ekugadzirisa? Kana iwe ukatenga mufananidzo kubva kumunyori, hazvisi kunyadzisa kukumbira kuti uone chitubu. Vakanaka makamera vane kukwanisa kunyora kushandiswa kwenguva yakareba.
Maitiro ekuona mafoto kubva pane flash drive? Pane iyo nubuck, iwe unoiisa mukati meyemukati slot uye tarisa nubuck - hapana. For nubuck imhando yeganda kubva kune iyo shangu inogadzirwa uye fenicha inokodzera ...
uko mahwindo download Lightroom Russian version. ipai chibatano chinyorwa. cwer.ru Adobe Photoshop Lightroom 4.1 Portable Russian version http://www.adobe.com/en/products/photoshop-lightroom.html Lightroom Direct link for free download http://shareflare.net/download/29740.2884d448eda5bXNXXfb324feXNXXXXXXX .html hongu hongu, uye download ipapo ...
Chii chakavhara chivharo? Iyi ndiyo nzira yekugadzirisa ruzivo kana zvikamu zvakasiyana zvemufananidzo zvichiratidzwa panguva dzakasiyana, uye kwete panguva imwe chete. Muchidimbu. Isu takagadzira chigadzirwa chinopedza zvachose izvi.
Chii chinonzi CROP chakatorwa pane chirimwa, kamera yakasimwa, nezvimwe? Photoshop, mucherechedzo (zvinoreva chiratidzo1-chiratidzo4, kwete pyadvak) - kamera yemutori, yakagadzirwa chete kune nyanzvi. Uye akasasa)))) ...
sei uchatamisa mapikicha ari jpeg pamanyorerwo kana ndapedza mharidzo chacho anofanira kushandurirwa mune pamanyorerwo JPEB, kupi achaponesa se? Kutarisa pamanyorerwo pamberi payo ...
Mubvunzo wakakomba. Pane anoziva here kuti zvakakosha sei zvinopesana kubva pane zvakakosha? Ikoko kunyange masango akafanana ...
Mubvunzo wakakomba. Pane chero munhu anoziva kuti nzira yemubatanidzwa inosiyana sei kubva pachinhu chikamu? Kune mamwe maburi akafanana ipapo ... Ini ndinowedzera ma5 angu. Chikamu chekuisa vhidhiyo yemhando yakanyanya kukwirira. Mahwanda - munoziva, ...
Nzira yekuwedzera sei ukuru hwemufananidzo mune zvirongwa zvepakombiyuta yako? svinura mufananidzo, svitsa mukati, shandura michina yekudhinda, yakajeka Peint, kubva kuruboshwe pamusoro pekutevedza SHADZA uye kurova zvisina kukodzera Resize image ne ...
Mupi gore ripi kuvepi kuonekwa kwekupfeka? Mukurumbira wake wakapa kuberekwa kutengesa kutsva kwekutengesa uye maitiro okutanga ekutsvaga kwemashamba, kusanganisira mapepa, mapepa uye mapepa emapepanhau. MuLondon, ...
Chii chinonzi ISO mune kamera? Zvimwechete nekunzwa kwefirimu, inoratidzwa muzvikamu zveyakajairika yenyika (ISO) .Kufananidza, kwakakwirira kwekunzwa, kwakakura zviyo zviri mufirimu uye kuratidzika kwe "ruzha" ...
Chiedza: chinonzi "6 class memory card" chinorevei ?!
Vhenekera: zvinorevei "6 kadhi memory memory"? Kwemakadhi ekurangarira eiyo Yakachengeteka Dhijitari (SD) uye Yakachengeteka Dhijitari HC (SDHC) mafomu, paramende yakakosha inoshandiswa kuongorora maitiro ekumhanya - kirasi yekumhanya (SD ...
HDR chii icho? http://blyg.livejournal.com/22444.html HDR chiitiko chitsva uye chazvino chekutora mifananidzo, nzira iyi inokubvumidza kuti uite mapikicha akanaka kwazvo kunyangwe kubva kune akawanda akajairwa. HDR ...
Chii chiri Selfie? Kutora mifananidzo yako pachako kuburikidza nekamberi kamera, kuburikidza negirazi kana kuti kutendeuka kwemazimbe nekuzviona iwe pachako. Shotgun. Uyu musikana asina mhosva asina kuziva rudo! ) ...
ndiudze nzira yekutora mufananidzo .. usazore, chinhu chikuru! Izvo zvinodiwa kuti usaite maererano neGOST 32843-2004 pane "Trivial mifananidzo yevasikana nevakadzi pane zvidiki zvidiki uye zvidiki zvehukama masheti". Yakanongedzwa kubva GOST: 2.6. Muenzaniso unofanira ...
Ndinoda kuisa magirazi pamifananidzo yangu, ndiudzei purogiramu ... kunze kwe photoshop
Ndiri kuda kuisa magirazi pane yangu pikicha, ndiudze chirongwa ... kunze kweiyo Photoshop Ona mhinduro yangu pano: http://otvet.mail.ru/question/55959991/ Gimp, pendi. Kwete, chirongwa "stylist", nezvimwewo mu superGu zvinogoneka. Handizive ... ....
Mibvunzo ye69 mu database yakagadzirwa mu 0,720 masekondi.